Iingqongqelo zabasetyhini ngeemputshane - enye yeyona ndlela ekhethekileyo yokukhetha yokugqoka kwixesha elifudumeleyo. Banobukeka bezinto eziphathekayo, bahambelana kakuhle kwimifanekiso yeziganeko ezihlukeneyo, babonise ngokucacileyo isibalo sabantu besifazane kwaye bangabangeli nto engabalulekanga.
Yintoni enxiba ngayo i-jumpsuit yabasetyhini ngeemfutshane?
Zonke iintlobo zee-overalls ezifutshane, nangona inani elikhulu lemibala, imibala, ukugqiba kunye nezinye iinkcukacha, zinokuhlulwa zibe ngamaqela amakhulu amabini: imodeli efuna ukugqithwa kwiziko elizimele njengezinto ezizimeleyo, kwakunye nezo zikhetho ezibandakanya ukubeka ngaphantsi kwazo zii-T-shirts, i-T-shirt okanye enye i-supplement.
Ikhetho lokuqala lizanele ngokwalo mfanekiso. Ngokuqhelekileyo ivalwe emuva, ngamanye amaxesha ihanjiswa ngemikhono okanye iikholeji. I-jumpsuit enjalo ngeemfutshane ziyakwazi ukugqithwa nangomsebenzi, ukuba iofisi ayinayo imfuneko yokukhangela imodeli yokugqoka. Unokubukeka enesidima kwaye kufanelekile ukugqoka kwiimeko ezizodwa. Into eyona nto kukuba ezi ngqongqelo zenziwe ngumbumba onobukhulu. Ngokomzekelo, ii-overalls zezimhlophe ezimhlophe kunye namafutshane amancinci athathwe ngokungafihli. Ingxaki ingasombululwa ngokufaka iingubo zangaphantsi ezingenasiphelo.
Unokugqoka imizekelo efanayo yee-overalls zombini kunye nezicathulo kwisithende kunye nengqungquthela, kunye nezicathulo kwi-flat flat. Ukuzizalisekisa kufuneka zibe ziintlobo zeengxowa eziphathekayo kunye nezixhobo eziqaqambileyo, kwaye ugcwalise umfanekiso we-cardigan okanye i-jacket-kosuh, ewusizo ubusuku obupholileyo.
Yintoni enxiba ngayo i-jimpsuit yababhinqa be-denim ngeemfutshane?
Iqela le sibini le-overalls lidla ngohlobo lwe-denim okanye olunye uhlobo lwekotoni. Ama-denim ehlotywa ngamaholide kunye neempuphu zikhangeleka ngokutsha nolutsha. Ngaphambi kwaloo mzekelo uqukethe iifutshane kunye neenkcukacha ezikhethekileyo ezifubeni esifubeni. Kwaye emva, ii-overalls zinikezwa ngamacangca amabini ahlukeneyo, ewela emva kwaye elungisa yonke into emzimbeni.
Ukuzalisekisa loo mzekelo i-T-shirts okanye i-T-shirts ezifanelekileyo kwi-style yezemidlalo. Kuya kuba mnandi ukujonga ngaphantsi kwemigangatho yeendlela ezihlukeneyo zokuhlambalaza. Kukwabaluleka ukujonga iinguqulelo zee-T-shirt ezixhotyiswe nge-armhole yaseMelika, echaphazelekayo ngeli xesha. Iingubo zee-overalls ezinemifanekiso emfutshane zikhetha ukukhetha ngokukhululekile kwi-flat flat okanye iqonga elincinci. Izibopho ziza kuba izitya, izicathulo, iipophoni okanye iifowuni emdeni .
Le ndlela yokugqithisa inokugqithwa ngezindlela ezininzi: gxiba ngokugcwele, kunye nekhwele eligqatsayo okanye ukhuphe emagxa onke phezulu. Ngokuxhomekeke kwimpembelelo oyifunayo, umfanekiso unokuncediswa kunye nezixhobo zemibala emnene, kunye neenkcukacha ezedlalayo ezenza isalathisi esincinci se-hooligan ngengubo.
Ukugqoka okude ngokuvuleka
Iibhokhwe zasebusika zaseMzcler zeBockler
I-t shirt enekhola
Ukulungisa ingubo phantsi kweMilavitsa
Ukugqoka okude emgangathweni ngemikhono
Izikhwele kwi-wedge - iimodeli ezinokwakheka kakhulu kunye nokokuzigqoka?
Gqoka nge sleeve
Ukugqoka i-Maxi kunye nemikhono emide
Ukugqoka i-Lilac - iingubo ezimnandi zeempawu ezimnandi kunye ezikhanyayo
Izicathulo zezikebhe ze-Beige kwisithende esiphezulu
Ingubo yebusika ye-cashmere
Ikhefu kwi-oven microwave
Capelin ngaphandle kweoli kwi-oven - recipe
Iipilisi zamanzi - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
Ukubhiyozela iminyaka engama-10 yomtshato?
Indlela yokufunda ukweqa?
Igumbi lokuhlala iimodyuli
Ukutsala ngesanti kwisiglasi
AmaKardig for women women fat
Ukulungiswa kweseyile yangasese
Isitayela esisemthethweni seengubo
Ndingaziphoqa njani ukuba ndiqhube ekuseni?
Isondo kunye ne thrush
Ukugqitha kwilanga - iimpawu kubantu abadala
Indlela yokuhlamba izitya emashini wokuhlamba?
Usuku Lweengqungquthela zamazwe ngamazwe
I-Cystitis - iimpawu zazo zonke izigaba kunye neentlobo zesifo